Farqiga u dhexeeya dib u fiirisoshooyinka Yubbe
Bedelaadkkii ahaa 12:37, 30 May 2020 (wax ka badal)
(Eng mahamed hasan balcade)
Tags: wax badalka mobilada Wax badalka webka ee moobiilada
Bedelaadkkii ahaa 13:12, 30 May 2020 (wax ka badal) (ka noqo)
Wax ka badalka ugu cusub →
Safka 16: Safka 16:
.dooxada geed quraan
.yubbe waxay ku talaa goob istaraatiiji ah marka loo eego geographical position. Laakin wali ma helin mansabkii siyaasiga ahaa ee ay ka mudnayd gobalka sanaag iyo guud ahaan somaliland. Taasi waxay soo dadajinaysaa inay yubbe deegaan ahaan iskugu tashato. Dadka degen yubbe iyo deganada an kor ku xusnay waa dad la jaala nabad galyada waxa taariikh mug iyo miisan leh ku leeyihiin dib u yagleelidii gobalka sanaag waxay door muuqda ka qaateen isku soo dhawayntii dadkii colaadu kala irdhaysay. Waxay shirarki nabad galyada oo aan kala joigsi lahayn ku qabanayeen yubbe1 iyo yubbe2. Dadaaalkaa ay nabada ku bixiyeen ka gadaal waxay door muhiima ku lahaaayeen fakerkii ahaa in somaliland wax isku darsato maamul wadaaga la dhisto taaso markiiba ka hirgashay gobalki sanaag iyo guud ahan somaliland! Hadaba intaa dadaala oo aan soo xusnay oo intuba guulaystay reer yubbe maxay ka dheefeen mase heleen abaalkii ay ku bixiyeen waa su,alaha is waydiinta mudan?
Hadii ayna helin maxa sababay oo hor istaagay?
Hada maxaa la gudboon?
Xaalku siduu 20 sano ka hor ahaa mayahay.
Hadaanu ahayn maxa is bedelay?
Su,aalaha iyo kuwa kaleba waa kuwa madaxaaga ka guuxaya waxa loo baahan yahay inaad qormo ka saabsan su,aalahaa la wadaagtid bulshada reer yubbe oo waayadan danbe la jaar noqday jahwareer siyaasadeed xasilooni daro deganada qayba culaysyo siyaasadeed.
Bedelaadkkii ahaa 13:12, 30 May 2020
Yubbe waa degmo ka tirsan gobolka sanaag waxay dhanka bariga ka xigta qiyaas ahaan 60km magaalo madaxda gobalka cergaabo. Waa magaalo taarikhiya waxay leedahay dhul bilic ahan soo jiidasho heer sare ah leh waxa ku yaala buuro ilqabatin leh, iyo beero aad u waawayn! Deegaan ahaan waxay xukuntaa dhul aad u balaadhan waxa hoos yimaada tuulooyinka iyo deeganadan hoos ku xusan. .tuulad ninku jooge .tuulada qaarar .tuulada jiingada .tuulada isrow Deeganka ay xukunto waxa ka mida .dooxad birxamar .dooxada damal jabay .dooxada qorilehe .dooxada wadaayin .dooxada caqa sudh .dooxada sadexgeed .dooxada dhudhub .dooxada ceelal higlo .dooxada karin .dooxada geed quraan .dooxada xundhurbeed .yubbe waxay ku talaa goob istaraatiiji ah marka loo eego geographical position. Laakin wali ma helin mansabkii siyaasiga ahaa ee ay ka mudnayd gobalka sanaag iyo guud ahaan somaliland. Taasi waxay soo dadajinaysaa inay yubbe deegaan ahaan iskugu tashato. Dadka degen yubbe iyo deganada an kor ku xusnay waa dad la jaala nabad galyada waxa taariikh mug iyo miisan leh ku leeyihiin dib u yagleelidii gobalka sanaag waxay door muuqda ka qaateen isku soo dhawayntii dadkii colaadu kala irdhaysay. Waxay shirarki nabad galyada oo aan kala joigsi lahayn ku qabanayeen yubbe1 iyo yubbe2. Dadaaalkaa ay nabada ku bixiyeen ka gadaal waxay door muhiima ku lahaaayeen fakerkii ahaa in somaliland wax isku darsato maamul wadaaga la dhisto taaso markiiba ka hirgashay gobalki sanaag iyo guud ahan somaliland! Hadaba intaa dadaala oo aan soo xusnay oo intuba guulaystay reer yubbe maxay ka dheefeen mase heleen abaalkii ay ku bixiyeen waa su,alaha is waydiinta mudan? Hadii ayna helin maxa sababay oo hor istaagay? Hada maxaa la gudboon? Xaalku siduu 20 sano ka hor ahaa mayahay. Hadaanu ahayn maxa is bedelay? Su,aalaha iyo kuwa kaleba waa kuwa madaxaaga ka guuxaya waxa loo baahan yahay inaad qormo ka saabsan su,aalahaa la wadaagtid bulshada reer yubbe oo waayadan danbe la jaar noqday jahwareer siyaasadeed xasilooni daro deganada qayba culaysyo siyaasadeed.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yubbe&oldid=201607"